7 Best Saffarada Day From Naples In Italy | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Best Saffarada Day From Naples In Italy
Naples waa ku yaab ah, magaalada Talyaani ka sugayeen. Waxaa lagu buuxiyey hills, dhismayaasha qadiimka ah, iyo yaabab yar iyo cute kale. Waxaa muhiimad ahaan waa magaalada ugu fiican Talyaani ee qof kasta oo raba in ay la kulmaan ruuxa dhab ah Talyaani iyo safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples.
Si kastaba ha ahaatee, aan ahayn oo dhan. Aad u baahan tahay inaad tag Naples ee dheriwadaag weyn inay sameeyaan. dheriwadaag ma maalin nooca waxaad ka heli kartaa meel kasta oo dunida ah. pizza Napoli waa wax gaar ah oo ku faantaa dhadhan aan la isku aadiyo karaa.
Laakiin waxaan iilataan. Haddii aad ku jirto Naples, Waa in aad waqtigaaga oo dhan ku qaataan yaabeen quruxda Magaalada iyo cunista ay pizza ammaan badan. Waxaad sidoo kale u baahan in ay soo booqdaan xeeran. Saas waxaa ugu wacan Naples ku faantaa qaar ka mid ah ku hareeraysan qurux badan ugu jira oo dhan ee Italy. From arkaynin Guryohoodii mooyee weyn lana si picturesque iyo xeebaha Amalfi fahmi caan ah - waxaad ka arki kartaa wax badan oo.
Iyadoo taas maskaxda, Waxaana u Malaynaynay aan kuu caawin lahaa by idin siinayo liiska kama dambaysta ah ee toddobada safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples, Italy. Ina keena aynu bilaabaan:
1. Mid ka mid ah Saffarada Day Best From Naples: Burburkiisii ​​hore Of Herculaneum
Waxaan doonayay in aan bilaabo cad, laakiin ka yar cad. Herculaneum waa abti u yar caan ah lana kulmay. The hadda caan 79 qarax AD ee Mount Vesuvius baabbi'iyey labada lana iyo Herculaneum deriska.
Si kastaba ha ahaatee, maanta, sharaf oo dhan inay tagaan si ay lana kulmay. Ku dhawaad ​​qof kasta oo aduunka ka ogyahay waxa lana waa, weli aad u yar oo ku saabsan ogaada Herculaneum. Tani waa ceeb weyn haddii aad na weydiisan.
First of dhan, Herculaneum waa ka sii raagayaan. Marka aad hesho waxaa, waxaad ka heli doontaa inta badan guryaha iyo taxadiri kale ku dhawaad ​​dhawrsan.
labaad, Herculaneum waxaa dhif ah isugu. Sida aynu hore u sheegay, arkaynin Guryohoodii mooyee, kuwanu waa yar oo loo yaqaan, waxaana la booqday in tiro yar. Waxaa sidoo kale ka yar oo fudud si ay u arkaan in si faahfaahsan weyn.
Booqashada Herculaneum waa mid aad u fudud, sida tareenada tagaan in ay ka Naples saacad kasta ama si. xitaa ma aha in aad walwalo markii sida aad ka dhergi doonaa waxa si aad u aragto arkaynin Guryohoodii mooyee, kuwaas oo.
2. lana kulmay
Inkastoo Herculaneum waa ka qurux, in fikraddii, aadan ka maqnaan karin lana kulmay. Well, ee safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples had iyo jeer in ka mid ah labada lana iyo Herculaneum.
magaalada oo dhan ee Naples ku nool hooska Vesuvius xoogga badan. Si kastaba ha ahaatee, kaliya lana dhihi karo si dhab ah in ay og yahay xooggii Vesuvius. Waxaad ka arki kartaa buurta markii in Pompei, oo daacad ah aad Haleela xoogga volcano firfircoon oo kaliya in Europe.
Marka aad tagto lana kulmay, aad u baahan tahay in ay diyaar u noqon. Meeshu waa dheeraad ah oo ku weyn dadka inta badan ka fekerto, si aad inuu halkaas tago sida ugu horreysa ee aad awoodid. On top of in, haddii aad xagaaga u tagaan, waxaa aad u kulul, si aad u baahan doontaa inaad keento biyo badan.
Si kastaba ha ahaatee, gaaridda lana waa qayb ka ugu fudud. Waxaad si dhakhso ah u gaari kartid oo Naples via tareenka, taas oo u dhaco halkaas maalintii oo dhan.
3. Mid ka mid ah Saffarada Day Best From Naples: Mount Vesuvius
Dabcan, ma booqasho Naples noqon kartaa dhamaystiran oo aan u arkay oo Vesuvius. macno ahaan Waxaad ma aan tegi karo iyadoo aan la arkayn, sababta oo ah baaxadda weyn oo loo arki karaa ka dhowaad meel kasta oo Naples.
Si kastaba ha ahaatee, aad ugu fiican ma la kulmi karaan meel fog ka, laakiin by taagan waxa on. buurta waa mid aad u dheer, laakiin waxaad weli qaadan kartaa safar habaysan iyo tug kor saacad ama ka yar. Waxaad ka heli doontaa waxaa u babac, laakiin waayo-aragnimo ah waxaad ka heli doontaa ugu sareysa waa gebi ahaanba ku kacaya waxa.
Si loo gaaro Mount Vesuvius, oo dhan waxaad u baahan tahay waa in tareenka la soomo ka Naples in aad qaadataa dhow hoose ee saldhigga u Ercolano Scavi. Markaas waxaad u baahan tahay in la qaato mid ka mid ah Vesuvio Express Basaska kuwa u taga inay dhibic-upka ee dhexdhexaad ah tug adag.
Pescara inay Tareenadu Naples
oo dhan waxay Amalfi Coast waxaa kaliya oo dawarsanayay in lagu arko. Marka aad halkaas tago, aad si deg deg ah ay ogaadaan sababta. The qarar weyn yihiin dhiirigalin baqeen, iyo quruxda badda Kililka.
Aad u baahan tahay inaad tareenka a kortaan in ay ama Sorrento ama Salerno. Markaas waxaad qaadan kartaa baska ama kiro baabuur si ay u tagaan in ka badan waddooyinka yaryar oo uyeelay xeebaha Amalfi ah.
Positano waa xaq dhexe ee xeebta iyo waa ugu magaalada qurux badan waxa on. Haddii aad abid arkay sawirada mid ka mid ah magaalooyinka on Coast Amalfi ah, aad u badan tahay arkay Positano. warkiisii ​​ku wareegsan magaalada waxaa u qalantay, sida muuqaal ah waa breathtaking.
Tareenadu Power in Naples
Salerno in Tareenadu Naples
Taranto in Tareenadu Naples
5. Mid ka mid ah Saffarada Day Best From Naples: Sorrento
Sorento waa magaalo yar oo ku fadhiya dhinaca ka soo horjeeda ee xeebaha Amalfi ah. Waa sidaas u dhaw in ay Naples, iyo waxa kale oo aad si fudud u gaadhi karto via tareen degaanka khadadka.
Magaalada faanaa laba Garaaci xeebaha iyo magaalo weyn jir. dadka intooda badan tag Sorrento, ma waayo, badda iyo qarar argagax ah, laakiin taariikhda. Sorrento runta ah waa duq magaalo ka sugayeen Talyaani. Waa uga yar yahay Naples oo uu leeyahay in run ruux Talyaani magaalooyinka Talyaani kaliya yar jir koonfureed waxay yeelan karaan.
On top of in, waa in aad hubaal booqo Sorrento on mid ka mid ah safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples, sababo la Capri. gasiiradda ee Capri dhow yahay oo waa by ilaa hadda mid ka mid ah gasiiradaha yar qurux badan Weligaa ma arki doono.
Foggia in Tareenadu Naples
Tivoli in Tareenadu Naples
Temoli in Tareenadu Naples
Lecce in ay Tareenadu Naples
6. Island The Of Ischia
Dhowr jasiiradaha qurux badan ku wareejin Naples. Si kastaba ha ahaatee, by fog ka mid ah kuwa ugu quruxda badan waa Ischia, oo halkan waa sababta:
Ischia waa jasiirada ugu wayn ee Bay ee Naples
Ischia oo dhan uu leeyahay: xeebaha, biyaha kaamerada, maqaayado, iyo dhismayaasha heer sare ah
Waa meesha ugu fiican ee ku raaxeysiga Naples. Waxa kale oo aad ka heli kartaa waxa ay si dhakhso ah by qaadashada doon xarunta of Naples.
7. Reggia Di Caserta: Versailles Talyaaniga
Iyagu ma ay wici this weyn 1200 madaxtooyada qolka Versailles Talyaani ah oo aan waxba. madaxtooyada waxaa ka buuxsamay jaranjarooyinka taariikhi oo waa a Unesco World Heritage Site. Waxa kale oo aad ka heli doontaa guri boqornimada caweyn iyo ururinta ah presepi - Christmas foggee ee Naples.
All oo dhan, ma waxaad tagi kartaa qalad ah adigoo booqanaya this madaxtooyada weyn. Waxaad ka saldhiga dhexe ee Naples qaadan kartaa tareen iyo ka baxdo saldhigga Caserta ah. madaxtooyada waa dabadeedna kaliya socod gaaban.
Naples si Tareenadu Caserta
Salerno in Tareenadu Caserta
Awoodda Tareenadu Caserta
Bari si ay Tareenadu Caserta
Sidaas, waxaa idiin ahaan, toddobada safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples. Haddii aad rabto in aad si dhab ah la kulmaan quruxda Naples, aad u baahan tahay si ay u tagaan on dhammaan safarrada. Sidoo kale, haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah, si xor ah u soo xiriir Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Best Saffarada Day From Naples In Italy” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Daytrips europetravel hawlgalin Naples Naples Tranride talooyin tareenka travelitaly traveltips